Google kwuputara mbido maka May 7: Pixel 3a na atụmanya | Gam akporosis
Ọnwa na-abịa nwere ike ịbụ ihe na-akpali akpali maka ndị hụrụ ekwentị. A nụrụ kepu kepu na OnePlus ga-ebuputa mbata ya, Onye OnePlus 7, na May 14; Asus al Zenfone 6, ke May 16; na Huawei si sub-ika na Na-asọpụrụ 20, Mee 21. Mana tupu ihe a niile, Google ga ekpughe ihe ijuanya ya.
Googlelọ ahịa dị n'ịntanetị Google nwere ugbu a na-ekwu na ihe ohuru na-abịa na onwa asaa. Mgbe o kpughere ya, ịkọ nkọ bilitere na nke a bụ mmemme mmalite maka ọbịbịa Pixel 3a na Pixel 3a XL.
Na mgbakwunye na akwụkwọ mmado na-akpọsa ihe omume ahụ, Google tinyekwara vidiyo nke agha nke Ndị na-abọ ọbọ: Agha ebighi ebi si New York. Vidio a dezigharịrị na-egosi otu ndị nwere Pixel 3 ekwentị. E nwekwara ụfọdụ ihe oyiyi si trailers nke Ndị na-akwụ ụgwọ: Endgame. Vidio ahụ kwụsịrị na Google na-ekpughe na playmojis nke Ndị na-abọ ọbọ dị ugbu a na Ama egwuregwu, naanị maka Pixel 3.
E nwekwara akụkọ mgbe ochie na-asị: "Mee 7: Nnukwu ihe na-abịa na Pixel Universe". Nwere ike ịdebanye aha na ntanetị weebụ iji nweta nkọwa gbasara mmalite ngwaahịa ahụ n'ụbọchị ahụ, dịka ọkwa.
Anyị amaghị ihe kpatara Google ji ejikọ ihe nkiri ahụ Ndị na-abọ ọbọ site na ịhapụ ekwentị abụọ, belụsọ na ịchọrọ ịgwa anyị na 'a' na aha ekwentị (Pixel 3a na Pixel 3a XL) dị mkpụmkpụ -abọ ọbọ. Ihe a abughi ihe doro anya.
7 Mee bu ubochi Google I / O malitere a na-atụ anya na ụlọ ọrụ Mountain View ga-eweta Pixel 3a na Pixel 3a XL na ihe omume ahụ. Ha abụọ bụ etiti dị n'etiti ma ga-adị ọnụ ala, nsụgharị nsụgharị nke ọkọlọtọ Pixel 3 na Pixel 3 XL.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google mara ọkwa na ihe ọhụrụ ga-abata na Mee 7: ọ nwere ike ịbụ Pixel 3a duo